China egwu ohuru na enwe obi uto ndu-C500 gbakwunyere Nmeputa na ulo oru | NUEVASA
Ihe omuma banyere ekweisi agaala, a na-ekewa ọtụtụ ntị ntị iji zụta n'egwuregwu. Esi zụta ntị ntị egwuregwu?
Isi ihe ịzụ ahịa maka ekweisi egwuregwu
Ggbagharị ma ọ bụ ịma jijiji ndị ọzọ site na mgbatị bụ isi ihe na-egbochi ịnụ ụtọ egwu. Karịsịa maka ekwe ntị ejiri wired, eriri nnyefe ogologo na-akụkarị ahụ ma ọ bụ ihu mgbe ọ na-agba ọsọ ma na-awụli elu, ma ọ bụ ọbụna na-adọta ntị ahụ n'onwe ya iji mee ka ọ daa, na-eme ka usoro mmega ahụ niile bụrụ ihe na-adịghị mma. N'ụzọ dị mma, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ugbu a na-ebupụta isi okwu nke enwere ike ijikọ na ngwaọrụ ikuku, nke na-emeri nsogbu mbụ nke anaghị egbochi mmega ahụ.
Na mgbakwunye na nhọrọ nke ekwe ntị ntị, enwere ọtụtụ ụdị ugbu a na-agbakwunye ntanye ntanetị idozi na ntị ntị ọdịnala. Ndị ọrụ nwere ike iji ihe mgbakwunye agbakwunye iji dozie eriri igwe ntị na uwe ma nwee otu usoro mmega ahụ dị ka igwe ntị ntị.
Yabụ aro: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ sọọsọ ọfụma, a ga-ebu ụzọ jụọ ekweisi ikuku
Igweisi a na - eme ka ọdịyo dị mma, nwee ọgaranya ma ọ bụghị egwu dị egwu, ma nwee ike ịnụ ụtọ ige ntị nke ọma. Clear weghachi etiti audio nke, uzo na obi ụtọ. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike ijikwa ikuku nke ngalaba bass, nke na-eme ka ụda dị mma ma na-agbanwe.
Nke gara aga: Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ isi na ndụ-S9 XR
Osote: Ọkachamara n'iji ya mere isi-ihe atụC600
Egwu ohuru na-enwe obi uto isi na ndụ
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ isi na isi-C2